ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
ကျနော်တို့မကြာခဏအစာရှောင်သောဖွံ့ဖြိုးဆဲလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ရှိသမျှသောနည်းပညာအပြောင်းအလဲအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတိုးတက်လာစေရန်။ ကျနော်တို့သေချာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်စေရန်တိုင်းကိုနည်းလမ်းကြိုးစား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဝစွာကျွေးမည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုးကားနိုင်ရန်ပိုမိုမော်ဒယ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုပူဇော်ခြင်းငှါပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြ၏။ ကျေးဇူးပြု ယခုအဆက်အသွယ်.
ပုံစံ - 2-4
ထုတ်ကုန်:DAICEL ပိုလီမာ ABS ပလတ်စတစ်အစေး
အဆင့်:ကြာရှည်-ခံနိုင်ရည် antistatic ABS ပလပ်စတစ်、Conductive နှင့် EMI-ABS ပလပ်စတစ်ကာကှယျ
ဆန့်ကျင်များအတွက်တိုးမြှင့်ဝယ်လိုအားရန်-တည်ငြိမ်သော,စီးကူးခြင်းနှင့် EMI-ဒြပ်ပေါင်းများကို,Daicel Polymer သည်ခေတ်မီသောပေါင်းစပ်မှုနှင့်ပေါ်လီမာအလွိုင်းနည်းပညာကို သုံး၍ အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည်.
ABS ပလပ်စတစ်ဗဓေလသစ် applications များ:
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.recycledplasticresin.com/my/abs-plastic-pellets.html
အကောင်းဆုံး ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ